“Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midira amin’ny fifalian’ny tomponao.” Matio 25:21
“Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen’Andriamanitra azy; mba hankalazana an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy.” 1 Petera 4:11
Fanoharana vitsivitsy; Matio 25:14-30
Famintinana: Talohan’ny handaozan’ity lehilahy iray ny taniny, dia niantso ny mpanompony telo izy ary nanankina tamin’izy ireo ny fananany, araka izay fahaizany avy. Ny voalohany dia nomeny talenta dimy (izay volabe), ny faharoa nomeny talenta roa, ary ny fahatelo nomeny talenta iray. Iretsy roa voalohany dia nampitombo ny fananan’ilay tompony, ho tonga avo roa heny. Fa ilay fahatelo kosa, nandevina ilay talenta. Rehefa niverina ny tompony, dia samy nahazo valisoa iretsy roa voalohany, fa ilay fahatelo kosa, voateny mafy ary voaroaka.
Heviny: Ilay lehilahy nandao ny taniny, dia Kristy, Izay any an-danitra ankehitriny. Nametraka fanomezam-pahasoavana, “talenta”, tamin’ny olona Izy, nomeny araka izay fahaizany avy. Ny fiverenan’ilay lehilahy, dia ny fiverenan’ny Tompo Jesosy.
Fampiharana: Ahoana no fanompoantsika ny Tompo? Toa tsy misy afa-tsy fomba roa: na isika mahafantatra tsara ny Tompo, ka mazoto manompo Azy, miankina amin’ny fahasoavany, manao ny aina tsy ho zavatra aza, indraindray; na isika tsy tena mifandray aminy am-pinoana, ka tsy mahafantatra Azy ary tsy manompo Azy. Ao amin’ilay sokajy voalohany dia misy ny vokatra ; fa ao amin’ilay faharoa kosa, tsy misy.
Tombony ho antsika ny miasa ho an’ny Tompo. Anjara tsara ny manompo Azy amin’ny fahasalamana, fitadidiana, saina, fialam-boly, fananana... Te hitovy amin’ilay mpanompo “ratsy sady malaina” ve isika, ka hanao tsinontsinona ny fanomezam-pahasoavana avy amin’ny Tompo? Inona no haverintsika aminy, rehefa hiverina Izy? Hiteny amintsika ve Izy hoe: “Midira amin’ny fifalian’ny tomponao”?